Madaxweyne Farmaajo oo Maanta la kulmaya Xisbiyada ka jira dalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xubno ka mid ah Xisbiyada kajira dalka ayaa xaqiijiyey in kulankaas uu ugu yeeray Madaxweynaha,isla markaana uu kusoo wargeliyey Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Soomaaliya Nuur Xersi Fuursade.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan waxaa kulan gaar ah uu Madaxtooyada kula qaatay Xubnaha sar sare ee Madasha Xisbiyada,iyada oo ay ka wada hadleen Arrimo dhowr ah.
Xubno ka mid ah xisbiyadda ayaa sheegay in Agaasimaha Guud ee Madaxtooyadda uu ku wargaliyay Casuumadda Madaxweyne Farmaajo.
Kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo xisbiyadda ayaa lagu waday in uu dhaco Maalintii khamiista aheyd ee la soo dhaafay,hayeeshee uu dib u dhacay,waxaana lagu wadaa in Maanta oo Sabti ah in uu qabsoomo.